राजपा भित्रै यस्तो दवाब, जान्छ त चुनावमा ? - Deshko News Deshko News राजपा भित्रै यस्तो दवाब, जान्छ त चुनावमा ? - Deshko News
राजपा भित्रै यस्तो दवाब, जान्छ त चुनावमा ?
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई पार्टीभित्रै तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन दबाब परेको छ। बबरमहलस्थित वन कार्यालयमा स्थापना गरिएको नयाँ पार्टी कार्यालयमा बुधबारदेखि सुरु भएको पदाधिकारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले संविधान संशोधनको परिणाम स्वीकार गरी चुनावमा जान दबाब दिएका छन्। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ।
पदाधिकारी बैठकको प्रारम्भमा राजपा अध्यक्ष ठाकुरले संक्षिप्त धारणा राख्दै संविधान संशोधन दुईतिहाइ मतले पारित नभएसम्म कुनै पनि चुनावमा सहभागी नहुने पार्टी अडान यथावत् रहेको बताएका थिए।